Profeeserummaa Tajaajila Waggoota 22 Booda Argame
Waxabajjii 02, 2010
Professor Tasammaa Taa'aa
Dr. Tasammaa Taa'aa jedhmu. Yunivarsitii Finfinfinnee kutaa Barnoota Seenaaa keessatti Barsiisummaa fi itti-gaafatamummaa sadarkaa adda addaan waggoota digdamii-lama eega tajaajilanii booda, Proofesarummaa guutuu Yuniversiticha irraa argatan.
Maatii Qonnaan bulaa irraa handaara magaala Naqamteetti kan argamtuu bakka Jaatoo jedhamutti ka dhalatan Professar Tesammaa Taa’aa, mana-barnootaa sadarkaa duraa fi lammataa achuma Naqamteetti xummuranii, ka yeroo sanatti “Dhaabbata Leenjii barsisootaa HARAAR” jedhamu seenanuun leenjifaman. Achii eebbifamanii, barsiisaa ta’uun waggoota sadiif hojjatan.
Sana booda, Yunivarsitii Finfinneetti deebi'anii barnoota seenaan digrii duraa fi ka lammataa eega fudhtanii booda, Doktoorummaa PHD-f immoo, as UNITED STATES keessa ka jiru, Yunivarsitii Michigaanitti baratan. Achii booda, gara biyyaatti deebi’anii, dhuma bara 1986 irraa eegalee haga ammaatti Yunivarsitii keessaa hojjetaa jiru.
Haadha-warraa fi ijoollee durbaa sadii fi dhiira tokko qabu, Professor Tasammaan. Ijoolleen duraa lamaan durboota lakkuu yoo ta'an barnoota Injiineriingiitiin Yuniversitii irraa eebbafamani hojjataa jiru. Kanneen booda, durbaa fi dhirri immoo, mana-barnootaa sadarkaa lammaffaa fi giddu galeessaa jiru. Professor Tasammaa, Jaallannee tu telefoonaan haasofsiise.
“Eyyeen dhiibbaa jabaa qaba"